Posted By: Rabbiguwaa: Febraayo 8, 2020 6: 15 No Comments
Markaad bedesho booska shay, sheygaas sidoo kale wuu isbedelaa. Haddii aan ka hadlayno isbedelka, booska sidoo kale wuxuu noqon lahaa hanuuninta waxyaabaha. Haddii aan kahadalno dahab ... Akhri wax dheeraad ah
Posted By: Rabbiguwaa: Janaayo 26, 2020 4: 49 No Comments
Dabeecadda hooyada Waxaad samaysaa maalmo aan weligood da 'aheyn Waxaad iisheegtaa waxa kujira ee aad caloosha geliso waqti si aan u neefsado, u liqo, u cuno Sidii oo kale ... Akhri wax dheeraad ah
Posted By: Rabbiguwaa: Janaayo 20, 2020 3: 57 No Comments
Anagoo ka duulayna aragtideena jacaylka ee abuuraya wax walba, waxaan aragnaa inuu marka labaad abuurayo, Idea. Fikradda ka dib, xoogga Jacaylka ayaa riixaya I ... Akhri wax dheeraad ah
Si xun u adeegsiga ereyga 'prehistory': adeegsiga erayga "prehistory", macnaha guud ee qaarada Afrika, waa eray aan sax ahayn, oo abuuray xaalad marin habaabin ah oo qatar ah.
Iskutallaabta Ankh ilaa iskutallaabta Rome: hoosteed Konstantinan; kuwa raacsan iimaanka cusub malahan wax badan oo ay wax ka beddelaan si ay tixgelin ugu yeeshaan diinta masiixiga iyo tan Masriyiinta (Afrikaanka)
Ma garanaysaa "ninka Ilaah"?
Imtixaanka Xisaabta: 90% way ku fashilmaan ama ma heli doonaan jawaabta
Feb16 08: 40